It is me. Ko Niknayman.: ပြည်တွင်းသတင်း အတိုအထွာ။
နအဖကနေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေချိုးခန်းရှိတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် ၊ ကိုသိန်းဆွေ အစရှိသူတို့ကို အဆောင်မှ လုံးဝ အပြင်မထုတ်ပါ ။ လုံးဝ အပြင်မထွက်ရပါ ။ ရေချိုးခန်းမရှိတဲ့ ရှင်သုတဥာဏ.... ၊ ကိုကိုကြီး ၊ ကိုဌေးကြွယ် ၊ ကိုမြအေး ၊ ကိုမာကီး ၊ ကိုဂျင်မီ ၊... အစရှိသူတို့ကို မနက် - ၁၅ မိနစ် မျက်နှာသစ် ထုတ် ၊ နေ့လည် - ၁၂:၀၀ မှ ၁:၀၀ ထိ ရေချိုး ၊ အ၀တ်လျှော် လမ်းလျှောက် ထုတ် ။ စုစုပေါင်း တရက်လျှင် (၁ နာရီ နှင့် ၁၅ မိနစ်) သာ အဆောင် အပြင်ထွက်ရသည် ။
ကိုလှမျိုးနောင်.... စတင်အဖမ်းခံရစဉ် ဘယ်ဘက်မျက်လုံး အခြေအနေဆိုးရွားနေခဲ့ပါသည်။
အင်းစိန်ဆေးရုံတွင်ခွဲစိတ် ၊ ဆရာဝန်မှ ဆေးရုံတွင် အနားယူရန်လိုဟုဆို ၊ S.B မှ ပယ်ချ ၊
အင်းစိန်ထောင်သို့ အတင်းပြန်ခေါ်၍ စစ်ကြောရေး ပြန်ဝင် ၊ ပြီးနောက် ထွက်ချက်ကို လတ်မှတ်ထိုးရန် အတင်းအကျပ် ဖတ်ခိုင်းရာမှ ဘယ်ဘက်မျက်လုံး ကွယ်သွားရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် န.အ.ဖ တွင် လုံးဝ တာဝန်ရှိပါသည် ။
Posted by Ko Niknayman at 6:42 PM
အဖွဲ့ ချုပ်ကြီး ဖွဲ့ ထားပါတယ်။ အများသိစေဖို့ြေ...
နေပြည်တော်မှ ၀န်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင် မကျေနပ်ချက်တွေမျ...
၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ကို ဒေါင်းလ...
လမင်း နှင့် ကြယ်တစ်စု သို့ပေးစာ။
မှန်သောစကားနားထောင်ပြီး လက်တွေ့ လုပ်ကြမှာလား။
နိုင်ငံကျော် ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး အမှတ်တရ။
အံ့သြဖွယ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် (၅) ဆူ ပုံစံ ခရမ်းချဉ်သ...
မကြာတော့ပါဖူး။ အရှင်ထွက်လား အသေထွက်လားဆိုတာ။
Mr. Creator ၏ ဓါတ်ပုံပြပွဲ။
ကမ္ဘာကျော် ချီးလေးချီး အငြိမ့် မကြာခင် တင်ဆက်ပြသပါမ...
ခင်ဗျားတို့ ကို စိန်ခေါ်တယ်။
ဖြူးဆရာတော် ဦးနရပတိနှင့် ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောသ...
ဘလော့များကို တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ နအဖအနေနဲ့အတော...
ကြောက်ဖား ရက်ဖားများ မဖြစ်ကြစေချင်။
ပုဂံမြို့ ၊ မင်္ဂလာဘုရားနားက ဘုရားတစ်ဆူ၏ မျက်နှာတော...
တောင်ကုတ်မြို့ က တိုက်ပွဲပြန်ခေါ်ပြီ၊ မြို့ အားလု...
သန်းရွှေရဲ့သားကြီး ထွန်းနိုင်ရွှေ။
LA မြို့ မှ Freedom Concert For Burma
တွေ့ တော့ တွေ့ တာဘဲ၊ တိုင်းပြည်နဲ့့ပြည်သူကို ဘာမှ...
ကျောင်းသားတပ်မတော်၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်။
အသေလှပချင်ရင်၊ ဘ၀အကူးကောင်းချင်ရင်၊ မိုက်ကြွေးသက်သ...
ပြည်သူ့ အာဇာနည် သက်ပိုင်စိုး နှင့် ကိုကိုဝင်း။
ကြောက်တယ်ဆိုတာ ညံ့ဖျင်းတာဘဲ။ အကြောက်တရားများမှ ကင်...
မြန်မာပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးတိုင်းတွင် ဒေါ်...
ကိုးရီးယားနိုင်ငံရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့မြန...
ပြည်သူ့ အတွက် ကြိုးစားနေကြတဲ့ ဘုန်းဘုန်းများကို ဂု...
သားသုံးသား ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုကော်မီတီ၏ အထူးကြေည...
နအဖထောင်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် အြေ...
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေဂီတအနုပညာရှင်များ၏ သဘောထားကြေညာခ...
ပြည်တွင်းအဖွဲ့(၁၂) ဖွဲ့ ပါဝင်သော လူထုလှုပ်ရှားမ...
နစ်နေမန်းထံ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု အုံကြ...
နအဖလက်အောက်က မြန်မာပြည်ဖွား ကျွဲ နွားများဘ၀။
လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို တိုင်ကြားရန် ၈၈...
နှစ်သစ်လက်ဆောင်အဖြစ် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အား ဂုဏ်ြ...